Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - 5.4.2 PhotoCity
Boggaga internetka sida Flickr iyo Facebook waxay dadka u oggolaanayaan inay sawirro la wadaagaan asxaabtooda iyo qoyskooda, waxayna sidoo kale abuuraan sawirro waawayn oo sawirro ah oo loo isticmaali karo ujeedooyin kale. Tusaale ahaan, Sameer Agarwal iyo jalayaashiisa (2011) isku dayeen inay isticmaalaan sawirada "Rome Rome Day" ka sameystaan ​​150,000 oo sawirro ah oo Rome ah si loo abuuro dib-u-dhiska 3D ee magaalada. Qaar ka mid ah dhismayaasha aadka u sawiray-sida Coliseum (sawir 5.10) - cilmi-baarayaashu waxay qayb ahaan guulaysteen, laakiin dib-u-dhiska ayaa soo gaaray, sababtoo ah sawirada intooda badan ayaa laga soo qaaday muuqaallada caanka ah, iyaga oo qaybo ka mid ah dhismayaasha aan la garaneynin. Sidaa awgeed, sawirada sawirada sawirada ayaan ku filneyn. Laakiin waxa dhacaya haddii mutadawiciin loo qori karo si loo soo ururiyo sawirrada lagama maarmaanka u ah sidii loo kobcin lahaa kuwa hore loo helli karo? Ka fekerida farshaxanka farshaxanka ee cutubka 1, maxaa dhacaya haddii sawirada diyaarka ah lagu hayo sawirrada xayawaanka?
Jaantuska 5.10: Dib-u-dhiska 3D-ga ee Coliseum oo laga soo qaaday sawirro waaweyn oo 2D ah oo ka socda mashruuca "Dhismaha Rome Maalin." Saddexagal ayaa ka dhigan meelaha ay sawiradu qaadeen. Waxaa lagu soo saaray ruqsad ka timid html version of Agarwal et al. (2011) .
Si loo helo suurtagalnimada ururinta la duubo ee sawirro badan, Kathleen Tuite iyo jalayaashii waxay soo saareen PhotoCity, oo ah sawir qaadis sawir ah. PhotoCity waxay u rogtay hawshii loo baahnaa ee xog ururinta xogta-u sameynta sawirada - waxqabadka cayaaraha ee ku lug leh kooxaha, qalabka, iyo calanka (sawir 5.11), waxaana markii ugu horreysey loo diyaariyey in la sameeyo dib-u-dhiska 3D ee laba jaamacadood: Jaamacadda Cornell iyo Jaamacadda ee Washington. Cilmi-baadhayaashu waxay bilawday geeddi-socodka iyada oo la dhajiyay sawirrada sawirrada dhismooyinka qaarkood Kadib, ciyaartoyda xarun kasta waxay kormeeraan xaaladda hadda taagan ee dib-u-dhiska iyo qodobbada lagu kasbaday iyada oo la dhajiyay sawirro hagaajiyay dib-u-dhiska. Tusaale ahaan, dib u dhiska maktabiga Uris (at Cornell) wuxuu ahaa mid aad u fiican, ciyaaryahanku wuxuu heli karaa dhibcooyin isagoo ku dhajinaya sawirro cusub. Laba sifo oo ah geeddi-socodkan soo dejinta ayaa aad muhiim u ah. Marka hore, tirada dhibcaha ciyaaryahan la helay waxay ku saleysan tahay inta ay sawiradooda ku daray dib u dhiska. Ta labaad, sawirada la soo dhajiyay waxay ahayd inay isku dhistaan ​​dib-u-dhiska hadda jira si ay u ansixiyaan. Dhamaadkii, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen in ay abuuraan qaab-dhismeed heer sare ah oo muraayadaha 3D ah oo dhismayaal ah (jaantus 5.12).
Jaantuska 5-aad: Sawirada "PhotoCity" waxay u rogtay hawsha loo baahnaa ee ururinta xogta (sida, sawirada sawirada) oo u rogay ciyaar. Waxaa dib-u-bixiyay ogolaansho ka timid Tuite et al. (2011) , sawirka 2.
Jaantuska 5.12: Ciyaarta PhotoCity waxay u suurto galisay cilmi-baarayaasha iyo ka-qaybgalayaasha in ay samaystaan ​​qaabab tayo sare leh oo 3D ah oo isticmaalaya sawirro ay soo gudbiyeen ka qaybgalayaasha. Waxaa dib-u-bixiyay ogolaansho ka timid Tuite et al. (2011) , sawirka 8.
Naqshadeynta PhotoCity ayaa xalisay laba dhibaato oo inta badan ka soo baxa xog ururinta xogta: ansixinta xogta iyo tijaabinta. Marka hore, sawiro ayaa la ansixiyey iyaga oo isbarbardhigaya sawiradii hore, kuwaas oo markaa la barbardhigay sawiradii hore oo dhan si ay dib ugu noqdaan sawirrada sawirada ee ay soo gudbiyeen cilmi-baarayaasha. Si kale haddii loo dhigo, sababtoo ah wax-qabadkan la dhisay, way adagtahay in qofku sawir ka qaado dhismaha khaldan, shil ahaan ama si ula kac ah. Tilmaame-naankan ayaa loola jeeday in nidaamku uu iska difaaco xogta xun. Tan labaad, habka dhibcaha ayaa si dabiici ah u tababaray kaqeybgalayaashu si ay u ururiyaan qiimaha ugu qiimaha badan - maaha xogta ugu habboon. Xaqiiqdii, halkan waa qaar ka mid ah istaraatijiyadaha ciyaartoyda lagu sharaxay isticmaalka si ay u helaan dhibcooyin dheeraad ah, taas oo u dhiganta inay ururinayso macluumaad qiimo leh (Tuite et al. 2011) :
Hadalladaas waxay muujinayaan in marka ka qaybgalayaasha la siiyo jawaab celin ku haboon, waxay noqon karaan kuwo khabiir ku ah ururinta macluumaadka danaha cilmi-baarayaasha.
Guud ahaan, mashruuca PhotoCity wuxuu muujinayaa in tijaabinta iyo tayada xogta aanay ahayn dhibaatooyin aan la isku hallayn karin oo lagu ururiyo xog ururinta. Intaa ka sokow, waxay muujineysaa in qaybinta xog ururinta xogta aysan ku koobnayn shaqooyinka ay dadku horay u qabteen, sida daawashada shimbiraha. Iyadoo naqshadda saxda ah, tabaruceyaasha waxaa lagu dhiirrigelin karaa inay sameeyaan waxyaabo kale.